Yama-Crocs kungabonakali langena evamile ekuphileni kwansuku zonke izakhamuzi enkulu yeNyakatho Melika, futhi manje le izicathulo linesizotha uwina expanses yeYurophu. Ngisho osaziwayo alinge ukugqoka lezi izimbadada iraba iwubuphukuphuku ezindaweni zomphakathi. Zonke abazigcoba Crocs, zingabantu Akumangalisi ukhululekile.
amakamu amabili aphikisanayo
Abantu zihlukaniswe amakamu amabili, ezithinta elithola abo kanye nebubi. Ongenayo ukubona ngezimbadada zenjoloba ngokuluhlaza ageza echibini noma engadini umsebenzi, akukho sobuhle bayo. Abanye abantu bayakujabulela ngempela ngenduduzo futhi ukubukeka kumnandi. Kodwa udokotela ohlinzayo olungisa amathambo categorical. Bathi ukuthi ubungane imilenze ugly plastic okubangela umonakalo ongalungiseki impilo. Kubonakala sengathi kuye kwavela nobufakazi obungenakuphikiswa.
Nemibi lokhu isihlangu
Ochwepheshe bathi inkinga eyinhloko-Crocs kuyinto isithende evulekile, eline-wayibhinca okuxekethile. Ngakho, uma uhamba ngezinyawo uhlala engazinzile, futhi isibopho phakathi isithende futhi uzwane siphukile. Ngokusho orthopedists, lezi zicathulo asifanele ukusetshenziswa nsuku zonke. Ngakho-ke, uma osevele Crocs induduzo, kuzodingeka ukuba alternate egqoke lokhu isihlangu nge imodeli ofanelekayo.
Yini ebangela enganele kokungathembeki isithende
Hhayi abethela uvalwe isithende ukuthwalela umthwalo uma uhamba izinzwane. Yesikhathi eside egqoke begqoke izimbadada zepulasitiki kungabangela izingozi ezinkulu zempilo, kuhlanganise tendinitis (ukuvuvukala umsipha izicubu), kumiswa amathambo, calluses buhlungu futhi corns. Njengoba ungase ucabange, lezi zinkinga efanayo bungabangela izicathulo ezibonakalayo eliphezulu, ezifana isikhumba izimbadada wayibhinca phezu isithende.
Ukungabi ematheni nezimo - omunye lokususa
Enye kusimo Crocs podiatrists ukubona ukungabi nayo yedwa nezimo. Monolithic iraba ukuhamba akuvumeli unyawo ukugoba futhi unbend kahle. Yingakho abalandeli lokhu isihlangu maningi amathuba okuthi uthole ubuhlungu emilenzeni. Podiatrists batusa kakhulu iziguli zabo ukugqoka-Crocs kusukela amahora 8 kuya ku-10 ngosuku. Ukukhethwa kungenzeka izigaba ezimbili zabantu: abantu instep okusezingeni eliphezulu futhi abantu abaphethwe eziphikelelayo umlenze ukuvuvukala. Futhi, ngokusho kongoti, akukho lula kule izicathulo. Bavame phawula indlela abantu begqoke-Crocs, bayokhubeka alahlekelwe ukuzimelela kwakhe.
Sonnik Tsvetkov - incazelo echazwe kakhulu yamaphupho